Iinguqulelo ezintsha zeLightroom ziya kuba nokugcinwa kwelifu njengemfuneko | Ndisuka mac
Zimbini zexabiso elinye ngumyalezo omtsha we-Adobe wesoftware yalo nyaka. Okanye ubuncinci kunye neenguqulelo ezintsha ze I-Lightroom Classic CC kunye ne-Lightroom CC ithathe indawo yeenguqulelo zangaphambili ezaziwa ngokuba yiFotohop Lightroom CC kunye neProjekthi yeNimbus ngokwahlukeneyo. Kwaye xa sithetha ngamabini ngexabiso lenye, sithetha ukuba ii-Adobe suites ezintsha ziya kuba nenkonzo yelifu, eyaziwa njenge Cloud Cloud, ngokunyanzelekileyo kunye nokusetyenziswa kwakhona kwefoto. Kwelinye icala, siya kuba neefoto zethu kuzo zonke izixhobo, kodwa kwelinye icala, ixabiso lokubhalisela liya kuba phezulu ngandlela thile.
Le nguqulo intsha iya kungqinelana nohlobo lwe-7 lwe-Lightroom. Ukuba ubhaliso oludibeneyo kwinkonzo yeLifu lokuyila alukuqinisekisi, ungasoloko uthenga Igumbi lokukhanya 6, kodwa ewe, ngekhe ubenazo iindaba zokuba iAdobe ibandakanya unyaka nonyaka, kunye nokulungiswa kweempazamo kunye neemodeli zekhamera ezintsha, kuba isicelo asizukuhlaziywa ngaphaya kukaJanuwari 2018.
Ukuba ukhetha uhlobo olutsha lwe-Lightroom, lUmrhumo wobhaliso uya kuba yi- € 11,99 / ngenyanga, ukuba sisebenza ngenkontileka nge-20 Gb, okanye nge- € 23,99 ukuba sikhetha i-1 Tb.
Ngaba ingxelo entsha ikufanele oko? Sikuxelela zonke iindaba ukuze ukwazi ukufikelela kwisigqibo:
Umsebenzi ohlaziyiweyo, kule misebenzi ilandelayo: ukwazisa usetyenziso, ukungenisa imifanekiso ngolwazi olongezelelweyo, ukusuka kwimodyuli yethala leencwadi ukuya kwimodyuli yophuhliso kunye nokulawula ngebrashi yokuphinda ubambe kwakhona. Kodwa siya kwiindawo: ekusebenzeni, ukuphucuka kuyabonakala, kodwa akumangalisi. Umzekelo sisiqalo, esiya kwimizuzwana esi-8 ukuya kwisi-6. Malunga nomsebenzi weefayile ze-RAW, sifumana iifayile apho kungekho nzuzo xa sisebenza nabo kwaye endaweni yoko kunye nabanye oomatshini ukuphuculwa phantse kube ngama-30%.
Siqhubekela kolunye uphuculo. Umzekelo, ukuphinda ubambe isibhakabhaka kuya kuchaneka ngakumbi, ngaphandle kokuchaphazela ezinye izinto. Imisebenzi emitsha ibandakanyiwe kwindawo yokubamba. Ukuphuculwa kwengxolo.
Njengoko besikulindele kwasekuqaleni, Igumbi lesibane CC iya kuba yinkonzo yelifu eliza kulandela, engenakwahlulwa kwinxalenye yokuhlela. Phakathi kwezinto eziluncedo esizifumanayo ngokwazi ukugcina iifoto zeRAW efini, ngelixa sijonga uhlobo olwehlisiweyo, oluya konga indawo kwiinkumbulo ezincinci.
Ukuba ungumsebenzisi weLightroom, isigqibo sokufudukela kuhlobo lweCC sesakho wedwa. Vavanya ukuba usebenzisa ntoni na isicelo kwaye ukuba awuyongcali yokudubula yonke imihla nge-SLR, mhlawumbi ngenguqulelo yangoku onokwanela. Kodwa ukuba ufuna onke amandla esoftware yeAdobe, inguqulelo yeCC ayisayi kukushiya ungakhathali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iinguqulelo ezintsha zeLightroom ziya kuba nokugcinwa kwelifu njengemfuneko
IscreenFlow 7 sifikelela kuguqulelo 7.1.1 ngezilungiso ezininzi ezibalulekileyo